Global Voices teny Malagasy » Nofoanana tampoka ny fanasana hiantsafa tamin’ny fandaharana fahitalavi-panjakana rosiana fa hay vehivavy ny filoha tale jeneralin’ny orinasa BlablaCar · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Mey 2019 4:56 GMT 1	 · Mpanoratra RuNet Echo Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Akon'ny RuNet
Baoritra notapahana misy ny sarin'i Irina Reyder, filoha tale jeneraly ao amin'ny biraon'ny BlaBlaCar Rosiana, pejy Facebookn'i  Irina Reyder
Nilaza i Irina Reyder, filoha tale jeneralin'ny sampan-draharaha Rosiana momba ny tolotra fiara iraisana fa nesorina ny fanasana azy hiantsafa tamin'ny Fantsona Voalohany an'ny fanjakana rehefa nahafantatra ny tonian'ny fandaharana fa vehivavy izy.
Nanoratra  tao amin'ny pejiny Facebook mikasika io tranga io i Reyder. Nilaza izy fa nihaino ny antso an-tariby teo amin'ilay mpamokatra fandaharana ao amin'ny Channel One sy ny tompon'andraikitry ny seraseram-bahoaka ao amin'ny BlaBlaCar ary nandrakitra ny resaka nifanaovan'izy ireo:
E (tonian-dahatsoratra ao amin'ny fandaharana Arahaba Maraina): Izao no endriny: mitondra fiara ny mpitati-baovanay no sady manadihady ny manam-pahaizana manokana ao aminareo.
PR (tompon'andraikitry ny seraseram-bahoaka ao amin'ny BlaBlaCar): Eny, mahafinaritra.
E: Ary iza ilay manam-pahaizana?
PR: Ny tale jeneraly Irina Reyder.
E: Oh … efa nanana lehilahy mahafinaritra ianareo, sa tsy izany?
PR: Eny, nanana an'i Alexey Lazorenko ho tale jeneraly izahay taloha, ary efa i Irina Reyder no izy ankehitriny.
E: Eny, fantatro ny fanovana mpitarika tao aminareo tamin'ny herintaona. Saingy tsy hiasa ho manam-pahaizana i Irina. Hitanao, somary manana hevidraikitra ny mpijery anay… Fantatrao, toy ny hoe rehefa misy mpisolovava tsara, dia matetika lehilahy. Ary lehilahy, fa tsy vehivavy no olona mahafantatra zavatra betsaka momba ny fiara – . Angamba ianao, Sergey, no azonay anaovana antsafa?
Raha nilaza tamin'ilay tonian'ny fandaharana i Sergey, tompon'andraikitry ny seraseran'i Reyder fa tsy misy lehilahy manam-pahaizana ao amin'ny orinasa, dia nampanantena hiverina izy rehefa avy mifampidinika amin'ny mpamokatra fandaharana. Tamin'ny antso an-tariby tatỳ aoriana, nilaza tamin'ny solontenan'ny BlaBlaCar izy ireo fa niova ny endriky ny tantara ka ireo mpampiasa ny tolotra indray no hanaovan'izy ireo antsafa.
“Ahoana ny hevitrao? Ampy fahaizana tsara ve ireo manam-pahaizana vaovao? “Hoy i Reyder nanontany ireo mpanaraka azy tamim-panesoana .
Tamin'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny T Journal , nohamafisin'ny fampahalalam-baovao momba ny teknolojia sy tambajotra sosialy, ny biraon'ny gazety manokan'ny Channel One ny fahamarinan'ilay resadresaka, saingy nanitrikitrika kosa fa tsy manavakavaka ny fomba fiasa. Na izany aza, tsy nanome tohan-kevitra ampy hanohanana ny filazana ny fanazavan'izy ireo:
Mpampita vaovao roa, tovolahy iray sy tovovavy iray, no mikasa hampiseho ny fahasamihafana amin'ny fomba fitsitsiana eo amin'ny lahy sy vavy. Hanadihady ireo lehilahy manam-pahaizana manokana ilay vehivavy mpanao gazety, raha hanadihady vehivavy maromaro kosa ilay tovolahy mpanangom-baovao. Satria ny tanjon'ilay vehivavy mpanangom-baovao dia ny hitsitsy amin'ny fandehanana fiara, ka hiresaka amin'ny solontenan'ny tolotra fiara iraisana izy (eny, noho ny rafitry ny fandaharana, tsy ny tsy fitoviana eo amin'ny lahy sy vavy, dia tokony ho lehilahy izany.)
Ahoana no maha-samihafa ny fomba fitsitsian'ny vehivavy amin'ny fomba fitsitsian'ny lehilahy, tsy nandinika izany ny Channel One. Saingy tsy dia resy lahatra loatra ny vahoaka, ary niharan'ny tsikera ny fomba fiasan'ilay fahitalavitra.
Nanambara ny tale jeneralin'ny BlaBlaCar, Irina Reyder fa tsy noraharahian'ny tonian'ny fandaharana Arahaba Maraina tao amin'ny Fantsona Voalohany izy raha nahita ry zareo fa vehivavy izy. Mahagaga fa mbola misy endrika hadalana tsy fantatsika ao amin'ny Fantsona Voalohany.
Na dia eo aza ny fanehoan-kevitra goavana atrehin'ny Fantsona Voalohany ao amin'ny aterineto, dia mbola lavitra ny lalan'i Rosia mikasika ny miralenta. Laharana faha-75 amin'ireo firenena 149 nohadihadian'ny Tatitra manerantany 2018 momba ny hantsana eo amin'ny lahy sy ny vavy  tontosain'ny Forum Ara-toekarena Manerantany i Rosia, manasongadina teboka tsara momba ny fahazoan'ny vehivavy fitsaboana sy fampianarana, saingy tsy manana lalàna miaro ny zon'izy ireo . Matetika ireo Rosiana mpiaro vehivavy sy ny mpanohana azy mampiasa ny media sosialy sy esoeso  mba hanehoana ny fomban-drazana sy ny fomba fanao mahazatra amin'ny fanilikilihana ny vehivavy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/09/137938/
 Tamin'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny T Journal: https://tjournal.ru/media/94879-pervyy-kanal-peredumal-priglashat-glavu-blablacar-v-peredachu-kogda-uznal-chto-ona-zhenshchina
 25 апреля 2019 г.: https://twitter.com/L_Stotch/status/1121448283791032321?ref_src=twsrc%5Etfw
 Tatitra manerantany 2018 momba ny hantsana eo amin'ny lahy sy ny vavy: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
 tsy manana lalàna miaro ny zon'izy ireo: https://themoscowtimes.com/articles/they-fought-the-law-russia-edges-closer-to-decriminalizing-domestic-violence-56882
 mampiasa ny media sosialy sy esoeso: https://globalvoices.org/2019/01/10/russian-feminists-flip-the-script-on-classic-soviet-films-one-speech-bubble-at-a-time/